Dooni meyno Farmaajo: Kacdoon shacab oo ka billowday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dooni meyno Farmaajo: Kacdoon shacab oo ka billowday Muqdisho
Kumanaan qof poo wata boorar ay ku qoran yihiin "Ma doonayno doorasho lagu shubto, oo sababta barakac" iyo erayo kale oo ay kamid yihiin "dooni meyno Farmaajo".
MUQDISHO, Soomaaliya - Kacdoon shacab ayaa ka billowday saakay magaaladda Muqdisho, oo looga soo horjeedo Maamulka Farmaajo, iyadoo dadweyne caraysan ay isagu soo baxeen wadooyinka xili Ciidan la dhigay.
Dadka dibadbaxa dhigaya ayaa ka kooban rag, dumar, carruur iyo waayeello kasoo horjeeda doorasho lagu shubto oo dalka ka qabto Farmaajo, waxayna cod dheer ku sheegeen inaysan doonaynin barakac.
Magaaladda Muqdisho ayaa qarka u saaran dagaal inuu ka qarxo, iyadoo ay wadooyinka saakay lasoo dhigay Ciidamo iska soo horjeeda, kuwa mucaaradka iyo dowladda, iyadoo meelaha qaar laga soo sheegay rasaas goos goos ah.
Dibadbaxayaasha ayaa wata boorar ay ku qoran yihiin: "Dooni meyno doorasho lagu shubto, oo sababta barakac", waxay sidoo kale wateen sawirka Farmaajo oo istallaab gaduudan saaran, iyagoo ku muujinaya sida ay u necban yihiin.
Banaanbaxyada ayaa intooda badan ka dhacayaan degmooyinka ku yaalla waqooyiga magaaladda, iyadoo laga cabsi qabo in dadka careysan ay soo gaaraan Madaxtooyadda iyo nawaaxigeeda, oo Ciidan badan saakay la dhigay.
Musharixiinta Mucaaradka ayaa gadaal ka riixaya banaanbaxyada, iyagoo sheegay inay qaban doonaan doorasho barbar socota mida uu qorsheeyay Farmaajo oo la qaadacay kadib markii gudiyadda doorashooyinka laga dhigay NISA iyo shaqaale dowladeed.